भिभो भि-२३इ सार्वजनिक, मूल्य कति? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
भिभो भि-२३इ सार्वजनिक, मूल्य कति?
भिभोले भि-२३इ स्मार्ट फोन सार्वजनिक गरेको छ। ५० मेगापिक्सल अटो फोकस पोर्ट्रेट सेल्फी फ्रन्ट क्यामरायुक्त भि-२३इ सार्वजिनक गरेको हो।
अटोफोकस तथा पोर्ट्रेट फिचरका माध्यमबाट सेल्फीहरुमा स्पष्टता हुने कम्पनीले बताएको छ। त्यस्तै एआई एक्स्ट्रिम नाइट पोर्ट्रेट मोडले रातको समयमा सेल्फी लिँदा पनि फोटो अँध्यारो आउँदैन।
डबल एक्सपोजर मोड, अपग्रेड गरिएको डुअल(भ्यू भिडियो तथा स्टेडिफेस सेल्फी भिडियो फिचरका कारण यसको फोटो र भिडियो खिच्ने शूटिङ एक्सपेरियन्समा पनि निकै सुधार ल्याइएको कम्पनीको भनाई छ।
नयाँ आई अटोफोकसले व्यक्तिका आँखालाई ट्र्याक गर्दछन् जसका कारण प्रयोगकर्ताले फ्ल्याश बलेको बेला पनि रमणीय पलहरुलाई कैद गर्न सक्दछन्। यसबाहेक, डुअल(भ्यू भिडियोले एकै पटक अगाडि र पछाडिको क्यामराले दुवै कोणबाट भिडियो खिच्न सक्छन्।
त्यसैगरी प्रयोगकर्ताले भिजुअलमा ब्याकग्राउण्ड फोटोहरु इम्पोर्ट गर्न। सेल्फी लिँदा हल्लिने वा ब्लर आउने समस्यालाई हुँदैन।यो फोन निकै पातलो र हलुका छ। यसमा ८ जीबीं ४ जीबी थप र्याम छ। आवश्यकता परेको बेला ४ जीबी आन्तरिक मेमोरीलाई र्यामका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छछ।
यो डिभाइस २४ जनवरीसम्म प्रि(बूकिङका लागि उपलब्ध छ। २५ जनवरीदेखि बिक्रीका लागि उपलब्ध हुनेछ। ८ जीबी र्याम र १२८ जीबी आन्तरिक मेमोरी भेरियन्टको डिभाइस ४४, ९९९ रुपैयाँ तथा ८ जीबी र्याम र २५६ जीबी आन्तरिक मेमोरी भेरियन्टको डिभाइसको मूल्य ४९, ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ५, २०७८, १०:१५:००